Dhijitari Yekuzvibata Dhata: Chakavanzika Chete-Chengetwa chekurova Zvakakodzera Chord naGen Z | Martech Zone
Mugovera, December 19, 2020 Mugovera, December 19, 2020 Lisa Speck
Iwo akabudirira kwazvo marongero ekushambadzira anokurudzirwa nekunzwisisa kwakadzama kwevanhu vavakagadzirirwa kusvika. Uye, tichifunga zera ndeimwe yeanonyanya kufungidzira ekusiyana kwehunhu nemaitiro, kutarisa kuburikidza nejenare yerudzi yakagara iri nzira inobatsira yevatengesi kuti vagadzire kunzwira tsitsi kune vateereri vavo.
Nhasi, vanotungamira-vakasendekera vemakambani vanoita sarudzo vari kutarisa munaGen Z, akazvarwa mushure ma1996, uye ndizvo chaizvo. Chizvarwa ichi chichaumba ramangwana uye zvinofungidzirwa kuti vatove nezvakawanda se $ 143 bhiriyoni mukushandisa simba. Nekudaro, iyo isingaenzaniswi huwandu hwekutanga uye sekondari kutsvagisa kuri kuitiswa pane iri cohort hakuite kunge kuri kuenda kure zvakakwana.
Kunyangwe zvichizivikanwa zvakanyanya kuti Gen Z inomiririra vekutanga vechokwadi vemadhijitari, nzira dzakajairika dzakatorwa kuti vawane zvavanoda uye zvishuwo hazvitiudze mabasa avo echokwadi edhijitari. Kunongedzera nzira dzekushambadzira mune ramangwana dzinonzwika dzinoenderana zvakanyanya nekunzwisisa kwakazara kwevanhu ava, izvo zvinounza zvakakosha: Zvikwata zvinofanirwa kuwedzera maonero avo ekuvaka tsitsi kuti vazvidavirire pazvinhu zvikuru zvemadhijitari zvechizvarwa chino.
Gen Z paFace Value
Tinofunga tinoziva Gen Z. Kuti ivo ndivo chizvarwa chakasiyana kwazvo parizvino. Kuti vakasimba, vanovimba, vane chinzvimbo, uye vane basa-rinotungamirwa. Kuti ivo vanoda rugare uye kugamuchirwa kune vese, uye kuita kuti nyika ive nani. Kuti ivo vane mweya wemabhizimusi uye havadi kuiswa mubhokisi. Uye, hongu, kuti ivo vakazvarwa zvine smartphone muruoko rwavo. Rondedzero inoenderera mberi, kusanganisira chinyorwa chisingarambike chekuti kuuya kwezera panguva yedambudziko re COVID-19 kuchasiya pachizvarwa chino.
Nekudaro, danho redu riripo rekunzwisisa rinongokwenya pamusoro pezvikonzero zviviri zvakakosha:
Nhoroondo, nzwisiso pazvizvarwa - uye zvimwe zvakati wandei zvikamu zvevatengi - zvinonyanya kuunganidzwa kuburikidza nemaitiro akafungidzirwa uye mhinduro dzeongororo. Nepo maitiro akataurwa uye manzwiro akakosha pakuisa, vanhu vanowanzo shupika kuyeuka zvavakaita zvekare uye havagone kunyatsotsanangura manzwiro avo nguva dzese.
Chokwadi chenyaya ndechekuti Gen Z haatozive kuti ndivanaani zvavari. Kuzivikanwa kwavo chinhu chinofamba sezvo vari pakati peiyo danho rinonyanya kuumba rehupenyu hwavo. Hunhu hwavo pachahwo huchachinja nekufamba kwenguva — zvakanyanya kunyanya kupfuura vekare, mazera akasimbiswa.
Kana tikatarisa ku Millennials uye nemabatiro atakaita zvisizvo zvisati zvaitika, zvikanganiso munzira dzenhaka dzekudzidza nezvezvizvarwa zviri pachena. Rangarira, ivo pakutanga vakanzi vane basa rakaipa maitiro uye vasina kuvimbika, izvo zvatinoziva iye zvino kuti hazvisi zvechokwadi.
Kuchera Zvakadzika NeDhijitari Yekuzvibata Dhata
Kuenzanisa Gen Z iripo pamharadzano yedhijitari uye hunhu. Uye nekuda kwekufambira mberi kwetekinoroji, kekutanga nguva kubva pazvizvarwa zvakadzidzwa, vashambadziri vanowana mukana kune data rehunhu rezvemaficha iro rinopa hwindo mune chaiko zviitiko zvepamhepo zveGen Z zvakadzama. Nhasi, zviuru zvevanhu zvema24 / 7 maitiro edhijitari anongoitika, asi achitenderwa, anoteedzerwa.
Dhijitari maitiro ehunhu, kana akabatanidzwa neinternet uye yakataurwa data, inogadzira yakakwana, yekuyambuka-chiteshi pikicha yeava vanhu vanotora izvo uye nei. Uye kana iwe ukawana iwo maonero akazara, iwe unowana zvechokwadi hunhu huchenjeri kubva kwahwo kuumba nzira dzekutengesa.
Hedzino nzira dzinoverengeka dhijitari maitiro ehunhu anogona kubatsira kukwidziridza kunzwisisa uye kunyatso fembera maererano neGen Z - kana chero chikamu chevatengi - zvisinei hazvo ruzivo rwekutangira kwauri kutanga kubva.
Yechokwadi cheki: Wana nzwisiso muvateereri iwe hapana chaunoziva nezvazvo, uye gumbo rinotarisa kuti wonozviongorora zvakare. Semuenzaniso, iwe unogona kuongorora chikamu uye brand indenders. Uye iwe unogona kudzidza maratidziro akapera vatengi vari kuzvibata.
Chimiro chitsva: Wedzera zvidimbu kune vateereri iwe unotoziva chimwe chinhu, asi hachina kukwana, nezve. Kana uine zvikamu zvakakosha uye munhu akagadzwa kare, kuziva zvavanoita online kunogona kuburitsa nzvimbo dzisingafungidzirwe dzemukana.
Kugadziriswa: Zivhura kusiyanisa kubva kumhinduro dzakataurwa-kwakakomba mune zviitiko apo vanhu vanokundikana kurangarira nenzira kwayo zviitiko zvavo zvekare.
Kuziva zvine chokwadi mashandisiro anoita vatengi mukati meiyo yakakura nzvimbo yedhijitari ine simba, kunyanya kushambadzira kwedhijitari. Kujekesa kunzvimbo dzinojairika dzakashanyirwa, maitiro ekutsvaga, muridzi weapp, nhoroondo yekutenga, uye zvimwe zvinogona kuratidza kuti munhu ndiani, chii chaanotarisira, nezvaari kutambura nazvo, uye zviitiko zvikuru zvehupenyu. Vakashongedzerwa neiyi simba rakasimba reGen Z mumatanho avo ese, vashambadzi vanogona kuisa kukwidziridzwa, kunongedza midhiya kutenga, kunatsiridza mameseji, uye kugadziridza zvemukati - pakati pezvimwe zvinhu - vane chivimbo chakanyanya.
Nzira Ye Mberi
Kuziva iyi data iripo uye kwete kuwedzera ndiko kusarudza nemaune kusanzwisisa vatengi. Izvo zvakati, kwete ese manyuko edhijitari maitiro ehunhu akagadzirwa akaenzana. Akanyanya kunaka ndeaya:
Sarudza-mukati, zvichireva kuti boka revatori vechikamu vanoziva vanobvuma kuti maitiro avo acherechedzwe, uye pane mukana wakaringana wekutsinhana pakati pemutsvagidzi nemutengi.
Longitudinal, mune izvo zviitiko zvinoongororwa nguva nekutenderera nguva, izvo zvinogona kujekesa kuvimbika kana kushomeka kwazvo pamwe chete nezvimwe zvinoitwa.
Robust, Kuumba hunhu hwenhanho hwakaringana muhukuru kuendesa mumiriri semuenzaniso wevatengi 'mabasa edhijitari nedata rakaringana rechako chako kuti riite.
Mudziyo agnostic, ichipa kugona kutarisa desktop uye nharembozha.
Cookie-chiratidzo, zvichireva kuti hazvivimbe nemakuki, zvinova zvinova zvinodikanwa munguva pfupi iri kutevera.
Sezvo Gen Z iri kuramba ichichinja, kudyidzana kwavo nedhijitari kuchaita chikamu chakakosha pakudzidzisa vashambadziri maitiro ekushanduka pamwe navo, kuwana kuvimba kwavo, uye kuvaka hukama hunogara. Mhando dzakanakisa dzinogamuchira iyi nyowani dhata sedhata senge nyowani yemakwikwi mukana, kwete chete mukurodza nzira dzakatarisana neGen Z, asi chero vateereri.
Tags: vateereri njerehunhu dhataCookiesmuchinjiko-chiteshidhijitari maitiro ehunhugen zchizvarwa zZvizvarwageographic dataZviuru zvemakorevasarudze mukugadzirisa
Lisa Speck ndiye Mutungamiriri wevakuru veOnalytics kuGongos, sangano rekubvunza rinotarisana nekutyaira centricity yemakambani emakambani eFortune 500.